Apple tsy mety mamoha fitaovana amin'ny alàlan'ny fanangonan-tsonia amin'ny fitsarana | Vaovao IPhone
Apple dia nampita tamin'ny Fitsarana Federaly any Brooklyn, New York, fa tsy afaka hiditra amina karazana fitaovana iOS mihidy izay ao amin'ny iOS 8 na avo kokoa izao i Apple. Toy izao no navalin'i Apple ny fangatahan'ny mpitsara James Orenstein an'i Apple hanampy ny Departemantan'ny Fitsarana Etazonia. Farany, ny tadiavin'ny mpitsara amerikana avaratra dia ny Apple manampy ny manam-pahefana hiditra amin'ireo fitaovana voasakana ireo mba hahazoana vaovao mifandraika amin'ny tranga samihafa izay eo am-pikarohana. Tsy hoe mandà an-tsokosoko an'io karazana fanao io i Apple, fa kosa ho an'ny orinasa dia tsy azo atao izany.
Hatramin'ny nanombohan'ny iOS 8 dia nijanona ny fitehirizana ny lakilen'ny encryption an'ireo fitaovana Apple, izay tsy ahafahan'ny Cupertino mamoha fitaovana iOS akory satria nangatahan'ny polisy izy. Raha tsy misy fanalahidy fanalahidy, Apple dia tsy afaka mivezivezy amin'ny kaody hidin-trano izay azon'ny mpampiasa iOS apetraka. Amin'ity fifandraisana eo alohan'ny Fitsarana ity, Notsiahivin'i Apple fa maherin'ny 90 isan-jaton'ny fitaovana iOS no ahitana farafahakeliny andiany 8 ny iOS, ka tsy azo atao ny miara-miasa amin'ny fahamarinana alohan'ny fangatahana toy izany.
Ireo fanovana ireo amin'ny fomba fitehirizana ny encryption an'ireo fitaovana dia nampiharina tamin'ny 2014 tamin'ny fahatongavan'i iOS 8, izay tsy tian'ny manampahefana velively. Ny talen'ny FBI James Comey dia efa naneho ny ahiahiny momba izany ny encryption izay ampidirin'ny orinasa toa an'i Apple sy Google dia tsy azon'ny manampahefana lazaina mihitsy. Tim Cook dia efa nahatsiahy omaly tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy fa tsy varavarana fidirana rindrambaiko ho an'ny fitaovan'izy ireo, hetsika iray tsy zakan'i Apple izany ary hametraka ny ahiahy amin'ny fahatokisan'ny mpampiasa sy ny mpanjifa ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Apple mandà ny hamoha fitaovana noho ny fangatahan'ny fitsarana
Tsy maintsy manova ny lohatenin'ny vaovao ianao. Mazava fa manintona kokoa ny milaza hoe "mandà" (izay sandoka) fa tsy "tsy afaka" (izay no nohazavainao tamin'ny lahatsoratra). Saingy tsy mitombina izany raha toa ianao ka voatery mandà azy miharihary sy sahy ao amin'io lahatsoratra io ihany.
Hoy aho ... Lohatenin'ny nenina re ...
Tokony ho saro-kenatra ianao hametraka zavatra ao amin'ny lohateny ary holavinao amin'ny fehintsoratra roa matavy any aoriana, na izay na manana fikasana ratsy ...
Raha ny marina dia efa leo ny miaritra an'ity karazana vaovao ity aho ka esoriko amin'ny sakafoko ...
Fa manaintaina tokoa ny ampondra, inona ny zaza saro-pady, toa ny hany tadiavin'izy ireo dia ny mamaky ny lahatsoratra hahita zavatra hitsikera, toa vehivavy 2 ianao miaraka amin'ny sères préparé !!!
Ara-dalàna raha mitaraina izy ireo raha mitady loharanom-pahalalana MATOTRA ity tranonkala ity, izay indraindray mitranga fa indraindray tsy….
Tsy mino an'izany akory izy ireo ...
Mora dia mora ny mamorona ny naoty sy ny lohateny fa mametraka ny tenanao eo amin'ny kiraron'ilay tonian-dahatsoratra, manandrana manao ezaka izy hanome antsika ny vaovao.
Ampahatsiahiviko anao fa mitondra fiainana koa izy ary tsy izany irery no ataony.
Raha mitsikera be ianao dia ataovy ny pejinao.
Tsy izaho no tonian-dahatsoratra ary azafady atsaharo ny fanompana, hany ka tsy mipetraka any Espana aho.
Meksikana aho ary tadidiko fa handeha handrava ny reninao izahay.
Na izany na tsy izany dia tsy fantatro ny antony itiavanao ny olana hiditra, hamakianao ary hanome hevitra raha tsy tianao ny zavatra soratany.
Apple TV 3 dia mahazo fantsona vaovao telo manomboka anio